တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လက်ဖက်သုပ် နောက်ဆက်တွဲ
Posted by မေဓာဝီ at 8:52 PM
ဒီသတင်းကြားတုန်းက ကျနော်လဲ... `ဟ၊ ငါဝယ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရောပါသေးလား မသိဘူးဟ´ ဆိုပြီး စိတ်ကဖြစ်သေးတယ်။ အတ္တပေါ့။ :) ဒါပေမယ့် ကျနော်ဝယ်ထားတာက ယုဇနလက်ဖက်ပါ။ အရီးတောင်းတို့၊ ပင်ပျိုရွက်နုတို့တော့ အထိနာကြမှာပဲနော်။ စိတ်ထဲကနေ အဲဒီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်လှမ်းပူမိသေးပေမယ့် တကယ်တမ်း အဲလိုမျိုးကြီးတွေ ဆိုးဆေးသုံးတာ ဘာညာနဲ့လဲ ပိုက်ဆံမရှာသင့်ပါဘူးလေ။
အသက်ကြီးလာလို့ လေထလို့ လက်ဖက် မစားတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဟန အတွက်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ။
တံဆိပ်အပိတ်ခံရပြီးရင် ပိုင်ရှင်ကိုရော နောက်တံဆိပ်သစ်နဲ့ ထပ်ထုတ်ဖို့ ခွင့်ပြုသလားဗျ..သူမိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက်နာမည်နဲ့ ထပ်ထုတ်ရင်ရော....အေးဗျာ မေဓာဝီအဖေပြောသလို..အစာအိမ် အမှိုက်ပုံးဖြစ်မှာတော့ မခံချင်ဘူး
3/16/2009 9:34 AM
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အတွက် ယခုလို စစ်ဆေးမှု့တွေ လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် (ရှားရှားပါးပါးမှ တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး) ကျေးဇူးတင်စကား ကျန်းမာရေးဌာနကို ဆိုလိုက်ပါရစေ။ (ဒီစေတနာသာမှန်ကန်ရိုးမှန်လျှင်)ဒီလို မှန်ကန်တဲ့ စေတနာတွေနဲ့ ပြည်သူကို စောင့်ရှောက်ရင် ပြည်သူကလည်း မှန်ကန်တဲ့ စေတနာတွေ တုံ့ပြန်ုကပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူကို စောင့်လျှောက်သော ၀န်ုကီးဌာနများ အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေေုကာင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနကို အရက်တွေ ဆေးလိပ်တွေ ဘိန်းတွေ ဆေးခြောက်တွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးဆက်လက် စစ်ဆေး အရေးယူပေးပါလို့... ပြီတော့ တရုပ်နို့မုံ ပိတ်ပင်တုံးက အရေးယူမှု့တွေပါ ပါတယ်..ဆိုတော့..ပြည်သူများကလည်း မိမိတို့ ပါးစပ်ကို အလို မလိုက်သင့်ဘူး၊ အဲ.. မ-မေလဲ.. စားလတ်စ လက္ဘက်ကလေးကို သံယောဇဉ်တွယ်မနေပဲ ၀ဲသာဝဲလိုက်ပါ လို့.. မေတ္တာဖြင့်.. မောင်ုကီး
i really glad u write blog again, i always visit ur blog.
3/16/2009 9:57 PM
မေရေ… တပြည်လုံးစားနေတဲ့ ရိုးရာစာဖြစ်တော့ အတော်စိတ်ပူမိတယ်… ပြီးတော့ အလှူမင်္ဂလာဆောင်က အစ ဧည့်ခံတဲ့အစားမိုလား… စာရင်းထဲမှာ မပါတဲ့တံဆိပ် အသဲအသန်လိုက်ရှာတာ ရည်မွန်ရိုးရိုးလက်ဖက်မပါဘူး… ဒါပေမယ့်…?????